Washington oo wafdi saraakiil ah u dirtay Kuuriyada Waqooyi – Radio Muqdisho
Washington oo wafdi saraakiil ah u dirtay Kuuriyada Waqooyi
War ka soo baxay Xukuumadda Washington ayaa lagu sheegay in Saraakiil Maraykana ay u joogaan Kuuriyada Woqooyi sidii uu u suurtoobi lahaa shir madaxeed ay yeeshaan Madaxweyne Trump iyo Kim Jong-un oo lafilayo in uu dhoco bisha June ee Soo socota,kaasi oo beryahan shaki la gelinayay.
Wasaaradda arimaha dibadda Maraykanka ayaa shaacisay in wada xaajood ka socdo dhanka Woqooyiga ee magaalada Panmonjom ee ku taalla xadka labada Kuuriya u dhexeeya ee milatariga ka caaggan.
Sung Kim oo ah Danjirihii hore ee Maraykanka u fadhiyey Kuuriyada Koonfureed, oo hogaaminaya weftiga Maraykanka ah ayaa la shiraya Choe son Hui, oo ah wasiir ku xigeenka arimaha dibadda Kuuriyada Woqooyi,kuwaasi oo ka wada hadlaya habka loo maamuusayo qabsoomidda kulanka hogaamiyaashsa Mareykanka iyo Waqooyiga Kuuriya.
Si kastaba ha ahaatee, mar la weydiiyay in Mr Kim ay ka go’an tahay inuu iska dhiibo hubkiisa nukliyeerka oo dhan, madaxweyne Moon waxaa uu sheegay in loo baahan yahay in Maraykanka iyo Kuuriyada woqooyi ay wada hadal yeeshaan si ay u caddeeyaan ujeeddooyinkooda.
Dhamaan dowladaha caalamka ayaa dhaga u taagaya natiijooyinka ka ka dhalankara shirka hoggaamiyaasha Mareykanka iyo Waqooyiga Kuuriya.
Spain oo badbaadisay 400 oo tahriibayaal Afrikaan ah